Xoghayaha Moderatka; Kent Persson oo hilmaamay hay'ad jirta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xoghayaha Moderatka; Kent Persson oo hilmaamay hay'ad jirta
La daabacay måndag 11 juni 2012 kl 10.31
kadib hadelkii uu sheegay shalay xoghayaha Moderatka kent Persson kaas oo ahaa in xisbigiiso ku talinayo in la hirgeliyo hay'ad dowliya oo cusob oo insha ku hayn doonta xaruumaha lagu xanaaneeyo waayeelka, ayaa hada waxaa dhaleeceeyey xisbisga ay dowladd wadaaga yehiin ee Kristdemokratiga. Hay'ad noocaan ah waa mid ay mar hore dowladda qorshaysay in la hirgeliyo waana arin faraha lagula jiro hirgelinteeda.
Shalay ayey ahayd markii Kent Persson oo ah xoghayaha xisbiga Moderatka Kent Persson asagaa la hadlaya saxaafada sheegay in xisbigiiso arintaan talo ahaan u soo jeedinayaan.
- Arinta muhiimka ah ee ay hay'adaan qabanayso waxa weeyan in ay qaadaan tallaabooyin kahotag ah iyo sharuudo la xiriira waxa laga doonayo in sameeyaan xaruumaha xanaanada waayeelka, hadii ay ka dhacdo xarun xaalad xun oo lagu la kaco waayeelka hay'adaan waxay gar u yeelanaysaa in ay albaabada iskugu dhufato xaruntaas, ayuu yeri markuu la hadlayey saxaafadda.
Lakiin xisbiga dowlad wadaaga la ah xisbigiisa ee Krisdemokratiga ayaa hindisaha Kent Persson ku timaamey mid ay far kumodantahay. Hay'ada dowligaa oo uu ku taliyey waa mid hirgelinteeda horay loogu howlanaa, waxa ay hay'adaan qabanaysana waa mid la mid ah sida oo sheegay inkastoo ay ka yara baahsantahay. Mahan keliya xaanaada waayeelka hay'ada hada hirgelinteeda lagu howlanyahay howlaha ay qabanayso balse waxaa ka mid ah deryeelka caafimaadka . Hirgelinta hay'adaan ayaa maraysa meel gabagabo ah, waxaana jira dad gudubsaday codsigooda ah in ay noqdaan maareeyaaha guud ee hay'adaan.